Muuri News Network » Daawo Sawirada : Muslimiinta kunool Gobolka Minnesota oo loo diiday dhul ay ka dhigan rabeen Qabuuro
Daawo Sawirada : Muslimiinta kunool Gobolka Minnesota oo loo diiday dhul ay ka dhigan rabeen Qabuuro
Maamulka Degmada Dakota ee gobolka Minnesota ee Dalka Mareykanka ayaa u diiday Muslimiinta kunool Degmadaasi dhul banaan ay doonayeen in ay ka dhigtaan qabuuro lagu aaso dadka Muslimiinta ah.
Xubno katirsan Jaaliyada Muslimiin ee kunool Gobolka Minnesota ayaa shir jaraa’id ay qabteen waxa ay kaga hadleen diidmada ay kala kulmeen maamulka Degmada Dakota ee ku aadan in ay helaan qabuuro ay meydadka ku aastaan.
Waxa ay sheegeen Xubnahan Warbaahinta la hadlay in Maamulka Degmada kala kulmeen diidmo iyagoona mar marsiiyo ka dhigteen maamulka in dhulkaasi aan loogu tala galin in laga dhigo qaaburo dadka lagu aaso.
Jeylaani M. Xuseen oo ah madaxa hay’ada CAIR oo u doodda xaquuqda muslimiinta Maraykanka qaybteeda Minnesota, ayaa sheegay in caqabado badan ay la kulmeen muslimiinta kunool Gobolkan , waxa uuna tilmamaay in goobo badan oo horey loogu diiday ay ugu dambeyn ku guuleesteen in ay helaan.
Qaar badan oo kamid ah Muslimiinta kunool Gobolka Minnesota, ayaa iyagana wax laga xumaado ku tilmaamay diidmada ay kala kulmeen maamulka Degmada Dakota ee ku aadan in helaan dhul ay ka dhigtaan xabaalo dadka meydaka muslimiinta lagu aaso.